Karffii fi truansiin maali?
… yeroo daa’imni mana jirachuu fi kara irraa gaalu qabu dhaa.
Seerri Hennepin County lakk. 16, Gadjalee A, B, ykn C, yeroo dargagooni guyyaa hujii fi dhumma torbanii irrati mana jiraachuu qabani mura. Karfffiin ka laalu dargaggoota umriin isaanii 17 fi gadii ti. Tiikeni duraa $25.00, ka lammafaa $50.00, fi ka sadaffaa akka mana heera dhihaatu tahuu ni mala. Dargaggooni badii akkana duratti ofirraa qaban yeroo tiikenni dura kennamu mana heeraa dhaquu qabu.
Umrrii 12 fi gaddi
Dilbataa – Kamisaa Sa’aa 9:00wb mana jirachauu qabu
Jimaataa fi Sanbata – Sa’a 10:00wb mana jiraachuu qabu
Dilbataa – Kamisa – Sa’aa 10:00wb mana jiraachuu qabu
Jimataa fi Sanbataa – Sa’aa 11:00wb nama jiraachuu qabu
Dilbataa – Kamisa – Sa’aa 9:00wb mana jiraachuu qabu
Jimaata fi Sanbataa – Sa’aa 12:00wd mana jiraachuu qabu
Yoo dargaggoon tokko bikka ummani jiru ykn bikka daldaalaa sa’alee armma oli kanat maatii ykn eeyddoota malee argame, poolisiin tiiketa sif kenna.
Hojatooni daldaalaa dargaggoota akka karffiin geeseen ni yaasu akka turan godhuun seera alaa waan taheef.
Poolisiin Minneapolis dargaaggoo yeroo Karffii alati argame qabanii akka waltajjii Karffii/Truancy ti fidan itti himamee jira.
Hojatoonni dargaggoota ti halkkan ala turuun hammeenya isaa himuuf, haala hamaa mana keessaa qabaatanii isaniis ni hubatu fi maalif akka seera karffii kana cabssaan baratu.
Matti/guddistooni ni qunnamamu fi dhufanni daa’imman isaanii fuudhuun dirqama isaaniiti.
Maatii fi dargaggooni rakkina qabaan yeroo toyataa kana mul’ateef gargaarsa yoo fedhan gara barbaachisuuti ni qajeelfamu
… yoo da’imni dhiifama seera guutu osoo hin qabaatin mana barnoota irraa ole dha.
Da’imni yoo guyyaa guutu ykn kutaa guyyaa kan mana barnoota irraa oolu tahee truantii tahaa. Guyyaaleen mana barnoota irraa hafame walitti aanaa tahuun irraa hin jiru.
Akka seera Minnesota 120.101 da’imi akka barnootaa fi dandeettii lammii gaarii itti tahaan qabaachisuun dirqama maatii fi gudistoota ti. Matiin daa’imni isani akka mana barnoota irraa haafan taasisan seeraan itti gaftamu.
Dhiifama Seera Guutu:
Yoo daa’imni ka dhukubu tahee
Yoo ka atoobissin jala darbee tahee
Yoo ayaana amantti tahee
Dhiifama Seera Hin Guutne
Yoo ka daa’imni dhaquu hin feene tahe
Yoo rakkini hatattamaa maatii keessa jiraate
Yoo daa’imi hiribaa hin kaane tahe
• Yoo truanssin itti fufe, manni barnootaa korboo truanssii guute gara Abukaattoo Hennepin Kawuntti eerguun akka tarkkanffiin seeraa irrati fudhatamu taasisaa.
Yoo mana seera ka dargaggoo si geessan maaltu tahaa?
• Da’ima kee akka mana seera dhaquu sagantaan ni qabamaaf. Osoo hin dhaqin dura eegduu/probation officer ykn hojata hawaasaa tu siif daa’ima kee waliin haala barnoota irraa hafu daa’ima kee haasa’u. Isheen/inni ajaja manni heera rakkina truanssi kana akka furattuuf kennu siif ibsa/iti.
Yeroo amma kanati, daa’imi kee abukaattoo tola isa/shee wakkalu waliin hasa’a.
• Akka mana seera dhihaateen, daa’imni kee mana barnoota irraa hafuu fi oolu ni gaafatamu. Yoo daa’imi kee amanee, ykn mana barnoota irraa haafun itti ragga’e Manni heera siif daa’ima kee tajaajiluuf ajaja kenna. Ajaji kunis waan kana dabalatuu mala:
___ Gorssa daa’ima ykn maatii/guddistootaaf
___ Rakkina sammuuf wal’aanssa ykn qorata
___ Hujii hawaasa gandaa keessaa qooda fudhatuu
___ Rakkina suusii kemikalaaf wal’aansa ykn qorata
___ Daa’imni maallaqaan adabamuu ykn garee hujii
___ Akka konkolaataa hamma bara 18 gahuu hin oofne dhorkuu
___ Maatiin akka daa’ima mana barnootaa guyyuu geessan tasisuu
___ Mana barnootaa addaati akka xumuruu taasisuu
Gorssa si gargaaru!
Mana barnoota dhaqi. Barnooni barbaachissaa dha
Yeroon mana ti gali hiriba gahaa argadhu
Yoo barbaachisee sa’a hiribaa si kaaftu lama guutadhu
Yoo rakkina hirriba ka’u qabaatte akka hiriyaani kee ganamu siif bilbilu godhuu
Yoo rakkina hiriyoota kee, maatii kee, barsiiftoota kee, ykn namoota biroo irraa qabaate, nama guddaa amantu ti himi.
Yoo gargaarsa barbaade qorichaa fi gorssa adda addaa ti dhimma bahi
Guyyaa meeqa akka mana barnootaatti argamtu ol kaasuuf galii kee goodhuu.
Daa’iman biraa walin waa’ee karffii fi Truanssi hasa’aa
Daa’ima kee mana barnootaa geessi qopheelee mana barnootaa adda addaa irraa qooda fudhuu
Daa’iman kee akka jaalattuu itti himii (daa’iman Gurgudoos!)
Daa’iman kee yoo manaa bahan eessa akka dhaqan beeki
Yeroo daa’iman kee yeroon mana barnootaa dhaqani fi yeroon galan jajadhu.
Fakki gaari tahii, itti mata tahii
Waan gargaarssa sif tahaan
(Gorsitoota, Hojattoota Hawaasaa, Narsoota)
TAJAJJIILA KARA MANA/GORSITOOTA MAATII
TAJAJJIILA HAWAASAA KA HENNEPIN COUNTY KEESSA JIRAN
Barruun tun ka qophooteef barbaachisummaa karffii fi truanssi si ibsuu fi.
Minneapolis Curfew Truancy Center
330 South 12th Street, Suite 15
Minneapolis, MN 55404-0630
Bilbila (612) 370-3965
Fax (612) 370-3967